AsiaApps – Page2– Latest Apps & Smartphone News
Asiaapps က ပရိသတ်ကြီးကို ခုတစ်ခေါက် ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ app လေးကတော့ DittyMoji – Holidays ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကို မြင်ကတည်းက စတစ်ကာ ဖန်တီးတဲ့ app ဆိုတာကို ရိပ်မိကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ DittyMoji…
iOS ဖုန်းတွေအတွက် တကယ့်ကို အသုံးဝင်မယ့် မြန်မာနှစ်တစ်ထောင် ပြက္ခဒိန် MyCal – Myanmar Calender
January 8, 2019 MoonReviewsNo Comment on iOS ဖုန်းတွေအတွက် တကယ့်ကို အသုံးဝင်မယ့် မြန်မာနှစ်တစ်ထောင် ပြက္ခဒိန် MyCal – Myanmar Calender
သူငယ်ချင်းတို့ရေ…. နှစ်ဟောင်း ၂၀၁၈ ကြီးကို အပြီးအပိုင် နှုတ်ဆက်ပြီး နှစ်သစ် ၂၀၁၉ ကြီးဆီကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီနော်။ အဲ့တော့ နှစ်သစ် ၂၀၁၉ ရဲ့ အခါကြီးရက်ကြီး ရုံးပိတ်ရက်တွေကို ကြည့်နိုင်မယ့် ပြက္ခဒိန်တစ်ခု ဝယ်ထားပြီးပြီလား??? မဝယ်ရသေးရင်လည်း…
January 7, 2019 MoonApp NewsNo Comment on Google Play store ထက်သာတဲ့ Epic Game Store အားသာချက် ၄ ချက်
ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Epic’s Game Store ကို စမ်းသုံးကြည့်မယ့် သူတွေအတွက် သူ့ရဲ့ Google Play ထက်သာတဲ့အချက်လေးချက်ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ Epic’ Game Store ကို PC ပေါ်မှာပဲ အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။…